Otu esi eme vidiyo gụnyere maka ndị debanyere aha YouTube LGBTQIA gị - YTpals
YouTube bụ ikpo okwu a na-ejikarị eme ihe n'ụwa niile, nke na-eme ka ọ dị ike nke ukwuu maka izisa ozi dị mkpa. Vidio ndị dị na YouTube nwere ikike ịkpụzi omenala na imetụta echiche ọha na eze n'ihe ụfọdụ. Ụdị mgbasa ozi ọ bụla nwere ike ime ka echiche ndị nwere nsogbu dị n'etiti ọha mmadụ kwalite ma ọ bụ nyere aka n'ịgbochi ha. Nke a bụ ya mere o ji dị mkpa ịmepụta ọdịnaya vidiyo na-agụnye yana anabata LGBTQIA gị Ndị debanyere aha YouTube.
Ịmepụta oghere LGBTQIA-Enyi na YouTube
Ọ bụ ezie na enweela ọganihu na ngosipụta nke iche iche na mgbasa ozi na ihuenyo, ọ ka dị anya site na ịghọ oghere gụnyere. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ pasent 20 nke ndị bi na United States na-akọwa dị ka LGBTQIA, ebe nanị pasent 9 bụ ndị na-eme ihe nkiri na telivishọn Primetime.
N'aka nke ọzọ, YouTube sitere n'ụkpụrụ dị iche iche hiwere ya. Ọ dịghị ka mgbasa ozi ọdịnala. Ebumnuche YouTube bụ inye onye ọ bụla olu. Nke a na-enye gị ike iji dozie ọdịiche dị na nnochite anya na oghere ịntanetị. Ị nwere ike iji olu gị na-akpọ maka ohere ndị ọzọ nwere enyi na YouTube.
Otu esi emepụta vidiyo na-akwalite nsonye ka ukwuu?
Mgbe ị na-eme vidiyo YouTube, ọ ga-abụ ihe dị mma icheta na mmadụ niile nwere echiche amaghị ihe ọ bụla. Echiche a nwere ike imetụta ndị mmadụ. Anyị na-ekpebi echiche anyị chọrọ itinye na vidiyo. Enwere ụzọ ị nwere ike isi kwalite nsonye yana mee vidiyo ndị ọzọ nwere enyi na ọwa YouTube gị. Ka anyị leba anya n’ụfọdụ n’ime ha.
1. Mmepụta Otu Diversity
A na-ekwukarị na onye na-anya maka ihe ọhụrụ bụ iche iche. Otu nke nwere echiche dị iche iche nwere ike iweta echiche ndị na-emepụta ihe na ihe ọhụrụ. Ọ bụrụ na ị nwere otu ndị na-emepụta vidiyo dị iche iche, ọ nwere ike igbochi gị ịdaba n'ime olulu nke enweghị uche. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-eme ọdịnaya na obodo LGBTQIA, ọ ga-adị mma ịnweta ntinye aka n'aka onye si na obodo. Ha ga-enyere gị aka ịghọta ihe na-adabara obodo na ihe nwere ike iwe iwe.
2. Isiokwu na Echiche
Chegharịa echiche ụdị vidiyo ị na-eme. Lelee isiokwu na echiche ndị ị tinyere na vidiyo gị. Ihe kachasị mkpa bụ ka ị ghara inwe echiche ọ bụla na vidiyo gị. Ọzọkwa, cheta isi ihe gbasara mkpa. Ị kwesịrị ịgbalị ka ị ghara ịmata ebe mmadụ na-aga ma ọ bụ agbụrụ ya mgbe ị na-eme vidiyo ọ gwụla ma ọ na-agbakwụnye uru ụfọdụ na gburugburu vidiyo ahụ.
3. Lelee ka ndị mmadụ si ahụ ọwa gị
Mgbe ị na-agbakwunye ọdịnaya ọ bụla na vidiyo gị, ma ọ bụ ụda olu, ihe ngosi nka, tụlee ma ọ bụrụ na enwere ọdịiche ọ bụla na nnọchite anya. Ọtụtụ mgbe, ka anyị na-eme vidiyo, anyị na-ewere nhọrọ ndabara nke bụ isi. Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ dị mma na-eduzi mkpebi ahụ. Site n'ilele ka ndị ọzọ ga-esi ele ọwa gị, ị ga-enwe ike ịgafe ebe ị na-emebu n'ịmepụta vidiyo ndị nwere enyi.
4. Ịhọrọ Okwu
Mgbe ị na-eke ọdịnaya vidiyo, nhọrọ okwu nwere ike ịdị mkpa nke ukwuu. Ọ dị mkpa ichebara echiche n'ụdị onyonyo anyị na-eji ka ị ghara ịkpasu ndị debanyere aha YouTube LGBTQIA iwe. Chegharịa echiche maka ojiji ị na-eji adjectives wee jiri okwu ndị nwere mmasị karịa. Ezi ihe atụ bụ iji 'ha' dịka nnọchiaha kama ịkpọ aha nwanyị na nke nwoke.
5. Kwe ka ọdịnaya gị kwuo maka onwe ya
Mgbe ị na-eke ọdịnaya vidiyo na YouTube, ịkwesighi ikwuwapụta na ọwa gị bụ nke gụnyere ma ọ bụ nwee enyi. Vidiyo gị nwere ike igosipụta echiche ndị a site na ihe atụ nke imeghe, njikọ na nguzozi. Iji gosi njikọ, ị nwere ike igosi mmekọrịta n'etiti ndị dị iche iche, ebe enwere ike igosi oghere site n'itinye intersectionality na iche iche.
Site na nrụtụ aka ndị a, ị ga-enwe ike ịmepụta ọdịnaya vidiyo na YouTube nke na-eme ka ọ bụrụ oghere na-akpakọrịta na enyi na enyi. Ọ bụrụ na ị na-achọ zụta ihe ngosi YouTube, mmasị, ma ọ bụ nkọwa, mgbe ahụ ytpals.com bụ ebe maka gị. Anyị na-enye ọwa YouTube dị elu iji mee ka ọwa gị na-aga nke ọma. Kpọtụrụ anyị taa ka ịmatakwu gbasara ọrụ.
Otu esi eme vidiyo gụnyere maka ndị debanyere aha YouTube LGBTQIA gị nke ndi edemede YTpals, 25 November 2021
YouTube Video Builder - Ngwaọrụ Mee N'onwe Gị maka forlọ Ahịa
Na Eprel 2020, YouTube Video Builder, ngwa ọrụ nke Google mepụtara maka ịmepụta mgbasa ozi dị mkpirikpi na YouTube, mere nke izizi ya. Google akaụntụ ịgụ nwere ịrịọ ohere ka beta version nke ngwá ọrụ, na and
3 Uzo iji wuo ndepụta ntinye aha nke YouTube - Nduzi anyi
N'ime ndị ọrụ niile dị iche iche nwere ike ịlele ọwa gị, ndị debanyere aha ị nwere bụ akụkụ kachasị mkpa nke YouTube na-etinye ọdịnaya gị kachasị. Dị mfe dị ka nke a…